शीर्ष नेतृत्वको ठूलो पंक्तिलाई अब सम्मानजनक बिदाइ गर्नुपर्छ कांग्रेसलाई जागरण मात्र होइन, अधिवेशन चाहिएको छ
आजको न्युज बुधबार, १५ जेठ २०७६
नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई जागरण चाहिएको छ । हामी देशभर जागरण अभियानमा छौँ । तर, कांग्रेस पार्टी देश संघीयतामा गइसक्दा पनि कांग्रेसले प्रदेश चिन्दैन । कांग्रेसले गाउँपालिका चिन्दैन । कांग्रेसले पूर्वगाविस चिन्छ । पूर्व गाविस अध्यक्ष चिन्छ । पूर्वनगरपालिका चिन्छ । कांग्रेसलाई जागरण मात्र होइन, अधिवेशन चाहिएको छ । कांग्रेसको अधिवेशन किन नगर्ने ? कांग्रेसले देशभर आफ्नो संगठनको संरचना किन नबनाउने ? कसले रोकेको छ ? केका लागि रोक्ने ? किन रोक्ने ? हामी बोल्ने कि नबोल्ने ? प्रश्न हामीसँग पनि छ ।
हाम्रा तमाम शीर्ष नेताहरूप्रति हाम्रो ठूलो सम्मान छ । यति भन्दै गर्दा तपाईं सम्मानित हुनुहुन्छ तर थाक्नुभयो, विश्राम गर्नुस् भनेर भन्ने कि नभन्ने ? विचारको सन्दर्भमा ठूलो क्रान्ति गर्नुपर्ने बेला आएको छ । संगठनका तमाम अवयवहरूलाई चुस्तदुरुस्त राखनुपर्ने बेला आएको छ । नेतृत्वको ठूलो पंक्तिलाई सम्मानजनक बिदाइ गरेर पार्टीलाई नयाँ ढंगले लिएर गएर नेकपाको अनुदारवादी पाइलालाई रोक्न कांग्रेसको एक आह्वान पर्याप्त छ भन्ने ठाउँमा पुर्‍याउनु हाम्रो दायित्व हो ।
यो सत्ताका विरुद्ध लडौँ तर के याद गरौँ भने नसुध्रिएको कांग्रेसले कांग्रेसले यो सत्ताका विरुद्ध लड्न सक्दैन । कांग्रेस सुध्रियो भने सत्ताका बारेमा कसैले चिन्ता गर्नुपर्दैन । सुध्रिएको कांग्रेसले उभिए मात्र पुग्छ । बोले मात्र पुग्छ । त्यति तागत राख्न सकिन्छ । कांग्रेस सुधारको अभियान नै कांग्रेसका निम्ति जागरणको अभियान हुन्छ ।
सरकारको मात्र होइन, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नियतको कुरा हो । यसले काम गर्दैन । काम गर्ने क्षमता नराखिसकेपछि यो प्रत्येक दिन अनुदार हुँदै जान्छ । यसले चार वर्षमा हामीलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउँछ, जहाँ सबै प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू भत्किसकेका हुनेछन् ।
सरकार नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्दै छ
यो सरकार नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न चाहन्छ । नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भन्नुभएको छ- मिडिया काउन्सिल विधेयक कुनै हालतमा फिर्ता हुँदैन । किनकि प्रेस अराजक भएको छ । अराजक प्रेसलाई ठेगान लगाइन्छ । उहाँको त्यही उद्घोषलाई सम्मान गर्दै हेटौँडामा नेकपाका कार्यकर्ताहरूले पत्रिका जलाएका छन् ।
कुनै बेला पत्रिकामा शेरबहादुर देउवाको सुरुवाल फुस्किएको तस्वीर छापियो । न शेरबहादुर देउवाले आह्वान गरे, न कांग्रेसका कार्यकर्ताहरू सडकमा पत्रिका जलाउन आए । कम्युनिष्ट र कांग्रेसमा यो फरक हो । त्यस कारण सरकारको क्षमता होइन, नियतको कुरा हो । सरकारको मात्र होइन, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नियतको कुरा हो । यसले काम गर्दैन । काम गर्ने क्षमता नराखिसकेपछि यो प्रत्येक दिन अनुदार हुँदै जान्छ । यसले चार वर्षमा हामीलाई यस्तो अवस्थामा पुर्‍याउँछ, जहाँ सबै प्रजातान्त्रिक संस्थाहरू भत्किसकेका हुनेछन् ।
निर्वाचन हुनेछ । निर्वाचनका बेला लेख्न तपाईंका कलमहरू स्वतन्त्र हुनेछैन । मत माग्नका लागि हाम्रा मुखहरू स्वतन्त्र हुनेछैनन् । निर्वाचन हुनेछ, त्यो निर्वाचनबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी शानदार रूपमा फेरि विजयी भएर आउनेछ । त्यो बाटोमा यो सत्ताले लाने प्रयास गर्दै छ । तर सक्छ ? सक्दैन । हामी मरेका छैनौँ । हामी जीवित छौँ । राजा ज्ञानेन्द्रको दुष्प्रयासलाई ठेगान लगायौँ भने राजा बन्न खोज्नेलाई रोक्ने तागत हामीसँग छ । डर रोक्न सकिन्न भन्नेमा होइन, यो सरकारले समय खेर फाल्यो भन्नेमा हो ।
प्रेस स्वतन्त्रता हाम्रो विचार हो । स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रो विचार हो तर व्यवहारमा केही त्रुटि भएको छ । अदालत चलाउँदाखेरि होस् वा प्रेसको कानुन बनाउँदाखेरि होस् । क्षमा माग्दै विचारका सन्दर्भमा दृढ हौँ तर व्यवहारमा केही चुकेका छौँ भन्ने कुरामा हामी तयार हो कि होइन ? तपाईंहरू लेख्न तयार हो कि होइन ?
प्रकाशित मिति: बुधबार, १५ जेठ २०७६